Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana rongony any Oklahoma - mpisolovava rongony Oklahoma
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa marijuana any Oklahoma
Oklahoma dia iray amin'ireo milamina indrindra lalàna marijuana ara-pitsaboana ao amin'ny firenena. Tamin'ny taon-dasa, nahatratra mihoatra ny Varotra 800 tapitrisa dolara.
Amin'io lafiny io, ny fahalalana fahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Oklahoma dia mety raha mety raha te hiditra amin'ny indostrian'ny rongony ao Oklahoma ianao.
Satria tsy mamaritra fepetra takiana mba hahazoana karatra MMJ dia heverina ho mora ny mahazo izany nefa tsy mila manaporofo ara-batana ny aretina mahazo ny fahasalamanao. Raha liana te hianatra bebe kokoa momba ny fahazoana Lisansa Cannabis any Oklahoma ianao eto dia izao no tokony ho fantatrao:
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fomba hanokafana doka rongony any Oklahoma
FIVAVAHANA MISY: Marijuana ara-pahasalamana ao amin'ny Lalàn'i Oklahoma
Karazana fahazoan-dàlana hampiharina ao Oklahoma
Misy fahazoan-dàlana efatra samihafa azonao ampiharina amin'ny Oklahoma, voalaza etsy ambany izy ireo:
Fahazoan-dàlana mari-pahaizana an-tsokosoko
Fahazoan-dàlana amin'ny mariage
Fahazoan-dàlana mari-pahaizana momba ny marijuana
Fahazoan-dàlana momba ny fitaterana marijuana
Fiantohana ny lisansa marijuana any Oklahoma
Araka ny lalàm-panoratan'i Oklahoma, ny saram-pandraharahana momba ny fahazoan-dàlana dia toy izao:
Lisansa mpamboly marijuana: 2,500 $
Fahazoan-dàlana Processeur marijuana: 2,500 $
Lisansa famoahana marijuana: 2,500 $
Lisansa fitaterana marijuana: $ 100
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Oklahoma
Mila manao fangatahana ianao araka ny filazan'ny Oklahoma Marijuana Authority (OMMA) tolo-kevitra. Ny antsipiriany sasany tokony ho fantatrao dia:
Fampiharana fampiharana: Ny fizotry ny fizotry ny OMMA momba ny fangatahana sy ny fanavaozana ny raharaham-barotra dia 90 andro fiasana. Raha toa ka lavina ny fangatahanao noho ny tsy fanolorany vaovao ilaina dia hanana 30 andro kalandrie ianao handefasana ny fampahalalana takiana amin'ny famerenana hodinihina, raha tsy izany dia tapitra ny fangatahana. Afaka mahita ny rehetra ianao teny ilaina hamenoana ny fangatahana ao amin'ny Medical Marijuana Authority
Fampiharana fanavaozana: Ny orinasa dia tokony handefa ny fangatahana fanavaozana alohan'ny daty famaranana ny fahazoan-dàlana, nefa tsy maintsy ho 60 andro. Raha mbola apetraka ara-potoana ny fangatahana fanavaozana dia hijanona ho manan-kery ny fahazoan-dàlana raha eo am-panaovana ny fangatahana fanavaozana.
Fahazoan-dàlana vaovao: Ireo mpamboly, mpikirakira ary dispensera dia homena fahazoan-dàlana hitaterana miaraka amin'ny fahazoan-dàlan'ny orinasany. Na ny fahazoan-dàlana hitondrana marijuana ara-pahasalamana dia samy ilaina ny fahazoan-dàlana hitondrana marijuana.
Residential Residency: Ny mpangataka fahazoan-dàlana dia ilaina hipetraka any Oklahoma roa taona alohan'ny hanaovana fangatahana na hipetraka any amin'ny fanjakana farafahakeliny dimy taona 25 lasa izay. Ny porofon'ny onenan'i Oklahoma dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fanomezana kopia nomerika iray na maromaro amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto:
Karatra famantarana ny lisansa Oklahoma ny lisansa
Karatra fanamarinana ny mpifidy Oklahoma, faktiora momba ny fampiasana, tsy anisany ny faktiora finday sy Internet
Fananana fonenana ao amin'ny State of Oklahoma
Fifanarahana momba ny fanofana trano ho an'ny trano fonenana ao amin'ny State of Oklahoma
Taratasy fanamarinana - Ny mpangataka orinasa rehetra dia tsy maintsy mandefa a Taratasy fanamarinana
Halaviran'ny sekoly: Takiana ho 1,000 XNUMX metatra ny elanelan'ny sekoly sy ny sekoly alohan'ny sekoly rehetra ny dispensera rehetra. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny sekolim-pianakaviana, ny fikolokoloana sy ny fikarakarana zaza.
Inona ny isan'ny fahazoan-dàlana avela ho an'ny indostrian'ny Cannabis any Oklahoma?
Ny zavatra tsara momba ny fangatahana fahazoan-dàlana mifandraika amin'ny MMJ dia, mifanohitra amin'ireo fanjakana maro any Etazonia, ny Oklahoma dia tsy manana fetra manerana ny fanjakana amin'ny isan'ny fahazoan-dàlana nekena. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 9.000 ny fahazoan-dàlana omena. Aza adino, na dia mora be aza ny miditra amin'ny tsenan'ny rongony any Oklahoma dia indostria mifaninana be izany.
Fepetra takiana ahafahana mangataka fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa Marijuana any Oklahoma
Ny mpangataka dia tokony ho 25 na mihoatra.
Ny mpangataka tsirairay dia tsy maintsy mponina ao Oklahoma.
Ny mpikambana, mpitantana ary mpikambana ao amin'ny birao misy ny mpangataka entity dia tsy maintsy mponina ao Oklahoma.
Ny entities dia tsy maintsy mampiseho fa farafaharatsiny manana tompony 75% nohazonin'ny mponina iray ao Oklahoma.
Ny tompona sy ny tompon'andraikitra rehetra dia tsy maintsy manome fanamarinana ifotony; ny fanamelohana heloka bevava tsy misy herisetra tao anatin'ny roa taona lasa ary ny fiampangana heloka bevava hafa tao anatin'ny dimy taona lasa ho an'ny tompona iray dia hanala ny mpangataka.
Ny orinasam-panaovana fangatahana dia tokony handefa kopian'ny antontan-taratasin'ny sekreteram-panjakana ao Oklahoma.
Ireo dispensaries dia tsy maintsy manome porofo fa tsy ao anatin'ny 1,000 metatra miala amin'ny fidirana amin'ny sekolim-panjakana na tsy miankina izy ireo.
Hetra any Oklahoma ho an'ny rongony
Ho an'ny varotra antsinjarany marijuana ara-pahasalamana dia hetra haba 7% izany. Saingy ny marijuana ara-pahasalamana dia iharan'ny hetra amin'ny varotra fanjakana sy eo an-toerana hafa.
Inona avy ireo fetran'ny rongony
Ny lalànan'ny Oklahoma dia mamela hatramin'ny 3 grama isaky ny fividianana ary rongony azo ampiasaina hatramin'ny 8 grama ao an-trano, karazan-tsakafo 72 aogositra, famonosana 1 ounce, zavamaniry matotra 6 ary zana-ketsa 6.
Niara-niasa tamin'i Tom Howard. Izy no nanampy anay hamonjy ny fifanarahana momba ny trano fonenana, ary tena mahay sy manampy izy!